AMBOASARY ATSIMO : “Miandrandra ny fahendren’ireo mpitsara ao amin’ny Hcc” ireo raiamandrenibe
Mahita ny tsy fetezana tamin’ny fomba nandaniana an’iny lalàm-pifidianana iny ihany koa ireo raiamandrenibe ao anatin’ny Distrikan’Amboasary Atsimo sy ny vondrona politika Mapar any an-toerana. 11 avril 2018
Nisy ny fanambaràna nataon’izy ireo ny faran’ny herinandro lasa teo iny izay mitsipaka marin-drano ny endrika fihantsiana rehetra mety hiteraka korontana eto amin’ny firenena. “Fifidianana madio, mangarahara sy eken’ny rehetra no andrandraintsika hatao eto amin’ny firenena. Vao miainga anefa isika dia iaraha-mahita ny zava-misy fa lalàm-pifidianana izay fantatra fa hampisy disadisa ny Malagasy io hatao amboletra io izay efa mampisy korontana sahady eo anivon’ny antenimieram-pirenena.
Araka izany, Tgv-Mapar sy ny solon-tenan’ny raimandrenibe eto Amboasary Atsimo dia manahy mafy amin’ny hisian’ny korontana aterak’io lalàm-pifidianana vaovao io, koa mangataka ny fitsarana avo momban’ny lalàm-panorenana izahay mba hitsinjo hatrany ny tombotsoan’ny tanindrazana sy ny vahoaka Malagasy”, hoy ny fanambaràna navoakan’izy ireo.
Mitodika any amin’ny fitsarana avo momban’ny lalàm-panorenana ny mason’ny rehetra ankehitriny, andrasana izay fanapahan-kevitr’ireo mpitsara mandrafitra ity andrim-panjakana ity amin’ny fanekena na tsia ilay lalàm-pifidianana mialohan’ny handefasana izany any amin’ny filoham-pirenena mba hampiharina sy hanankery eto amin’ny firenena.